Erdogan oo eedeymo kulul loo soo jeediyay - BBC News Somali
Erdogan oo eedeymo kulul loo soo jeediyay
Nin muran badan ka taagan yahay oo haysta dhalashada Turkiga iyo midda Iiraan oo dahabka ka ganacsada ayaa maxkamad ku taalla Maraykanka u sheegay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shaqsiyan u fasaxay ganacsiyadiisa meesha uga dhacay xayiraaddii saarnayd Iiraan.
Reza Zarrab oo 34 jir ah ayaa markhaati muhiim ah ka ah dacwad dambiyeed loo haysto nin bangi ka shaqeeya oo uu ku eedeeyay in uu kala shaqeeyay in Iiraan ay si sharci darro ah lacag ku hesho.
Markhaatiga uu furay Zarrab ayuu Erdogan lugaha ugu soo galiyay lacag si sharci darro ah qarsoodi loogu kala gudbiyay oo isaga iyo Mehmet Hakan Atilla oo bangi ka shaqeeya ay sameeyeen 2010kii ilaa 2015kii, arrintaas ayaana lagu eedeeyay in ay suurtagalisay in Iiraan ay isticmaasho suuqyada caalamiga ah, inkastoo Maraykanku cunaqabateeyay.
Wuxuu sheegay in wasiirkii dhaqaalaha uu ku wargaliyay 2012kii in Erdogan oo markaas ra'iisulwasaare ahaa uu amar ku siiyay bangiyada Turkiga in ay ka qayb qaataan qorshehaas oo laga helayay malaayiin doolar.
Laakiin wuxuu go'aansaday in uu la shaqeeyo dacwad oogeyaasha, waana qofka ugu muhiimsan makhraatiyada daccwadda magaalada New York ka socota.
Erdogan oo cambaareeyay “munaafaqnimada” reer Galbeedka
Ra'iisulwasaare ku xigeenka Turkiga Bekir Bozdag ayaa ka jawaabay eedaymahaas, wuxuuna sheegay in Zarab "caddaadis lagu saaray in uu hadal aan waxba ka jirin sheego".
Isagoo la hadlaya wakaalad warar oo ay dawladdu maamusho ayuu dacwadda socota ku tilmaamay "masrax".
Dacwaddan ayaa si dhaw loogala socdaa dalka Turkiga laakiin guud ahaan warbaahinta dalkaasi si feejigan ayay u tabinaysaa, sida uu ku warramayo weriyaha BBC laanta af Turkiga Enis Senerdem.